‘ब्याट र बल प्रिय लाग्छ’ - अन्य - नारी
‘ब्याट र बल प्रिय लाग्छ’
जेष्ठ १८, २०७८ बाँकेमा जन्मिएकी ३१ वर्षीया बिनु बुढा मगर १६ वर्षयता खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय छिन् । आर्मी क्लबबाट फुटबल खेल्ने बुवाको प्रेरणाबाट उनी यो क्षेत्रमा आएकी हुन् । बिनु बुढा मगर (क्रिकेटर) सँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
फुटबल र एथलेटिक्स हुँदै क्रिकेटसम्म आइपुग्दा तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
स्कुल लेभलदेखि नै फुटबल खेल्थें । उतिबेला निकै रमाइलो थियो, यति मात्र नभएर म दौड र क्रिकेट पनि सानैदेखि खेल्थें । खेल क्षेत्रमा म एकदमै सन्तुष्ट छु ।
फुटबलबाट क्रिकेटमा युटर्न हुनुको कारण ? क्रिकेट ग्ल्यामर खेल भएर हो ?
रनिङ राम्रो भएकाले एथलेटिक्समा लागें । पाँचौं राष्ट्रिय खेलमा खेल्दा, एउटा खेलाडीले दुईटा छुट्टाछुट्टै गेम खेल्न नपाइने थाहा भयो । म पुलिसमा आबद्ध भएकीले एथलेटिक्स नै छानें । त्यसपछि क्रिकेटतिर रुचि बढ्दै गयो र सन् २००७ देखि क्रिकेटमा लागें । हामीले खेल्दा क्रिकेटमा कुनै ग्ल्यामर वा पैसा कमाउने वातावरण नै थिएन ।
क्रिकेटमा टर्न हुँदा केही अप्ठ्यारो भयो कि ?
सानैदेखि खेल्ने भएकाले मलाई त्यति गाह्रो भएन ।
ब्याट र बल तथा फुटबलको भकुन्डोमा कुन प्रिय लाग्छ ?
ब्याट र बल नै प्रिय लाग्छ ।
तपाईंले जीवनमा असफलताबाट के सिक्ने गर्नुभएको छ ?
पहिले भन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्छ, के त्रुटि थियो त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ, अगाडि अझैं राम्रो गर्छु भन्ने आँट लिनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्ने गरेकी छु ।
ग्राउन्डमा एकदमै खुसी र दुःखी भएको क्षण ?
खेलमा विजय हुँदा खुसी लाग्छ । तर, राम्रो प्रदर्शन गर्दागर्दैं पनि पराजय हुँदा दुःख लाग्छ ।
तनावमा हुँदा व्यक्तित्व रूपमा तपाईं कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ ?
तनावमा भएको बेला सकेसम्म आफ्नो व्यक्तित्वलाई ठीकठाक राख्ने प्रयास गर्छु ।
जीवनमा आमा हुनु वा राष्ट्रको गौरवशाली खेलाडी हुनुमा कुन कुराले बढी अर्थ राख्छ ?
खेल्ने बेला नतमस्तक थिएँ खेलाडी हुनुमा । जब म आमा बनें त्यसभन्दा ठूलो कुरा जीवनमा अर्को केही छैन भन्ने लाग्यो ।
समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
श्रीमान्–श्रीमती दुवै सशस्त्र प्रहरी बलमा छौं । त्यसैले एक–अर्कालाई नजिकबाट बुझेका छौं । उहाँले नानी र मेरो करियरको ख्याल गर्नुहुन्छ । उहाँकै बलमा नानी र करियरमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
महिला खेलाडीका लागि के आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
म्याच निरन्तर हुनुपर्‍यो । उनीहरू व्यस्त रहनुपर्छ । पहिलेको तुलनामा सुविधा पनि राम्रो छ । क्रिकेटबारे सोच्ने मानिस पनि बढेका छन् । तालिमलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्‍यो जुन
सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । गेम हुनु दुई महिनाअगाडि मात्रै तालिम दिएर भएन ।
श्रावण ४, २०७५ - साउने सोमबार कत्तिको लाग्छ ?